AKHRISO: QM oo sheegtay in 8.7 Milyan oo Reer Afghanistan oo wajahaya macluul daran – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
AKHRISO: QM oo sheegtay in 8.7 Milyan oo Reer Afghanistan oo wajahaya macluul daran
January 14, 2022 Xuseen 1
Afghanistaan, sida waddamo badan oo ahlul-tawxiid ah, waxaa qallad ku noqday cawaan Islaamnimada lajibbaysan oo haddana sixun uga jaahilsan – sida Taalibaan, Shabaab, Dacish iwm. Cadow kuwan Islaamka iyo muslimiinta uga xun majiraan xaqiiqdii.
Waxaan sixun ufajacay mar sanadkii hore ay BBC-du warbixin kasoo diyaarisay dalka Mozambique oo xasuuqyo ba’an loogu geystay shacab masaakiin ah oo beer-falato u badan, mujrimiintaasna lagu magacaabay “Al-Shabaab”.
Masiibaduse waa mid muddo ilaa 70 sanadood ah ay Sahyuuniyiintu Caalamka Islaamka si qarsoon oo sireysan ugasoo hirgelinayeen, iyaga oo culimadii iyo mufakiriintii labeenta u ahaa si dawaali ah iyo si dadbanba usoo khaarajinayay.
Xamaasaddii Islaamnimo weli way nooshahay, laakiin Tawradda Islaamigu ma aha mid laga agdhoweeyo dhammaan shucuurta laablakaca ah ee sida xamaasadda iyo caadifadda. Waa tawrad lagaga dhabeeyo oo keliya cilmi miid ah, xikmad baahsan, sabar badan, fariidnimo foojigaysan, fiiradheeri fog, iyo khibrad dheer oo dagaalka maskaxeed lagu duuliyo.